मुख्यमन्त्री राउतमाथि सिके राउतको हमलाः भोजभतेरमा ४ करोड स्वाहा गर्न केन्द्रले रोकेन, अहिले हुरीपिडितलाई २० दिन खानदिन नसक्ने ? — Motivatenews.Com
मुख्यमन्त्री राउतमाथि सिके राउतको हमलाः भोजभतेरमा ४ करोड स्वाहा गर्न केन्द्रले रोकेन, अहिले हुरीपिडितलाई २० दिन खानदिन नसक्ने ?
काठमाडौँ । केही दिन अगाडी मात्रै मूलधारको राजनीतिमा आएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले प्रदेश २ सरकारमाथि रोस प्रकट गरेका छन् । बारा र पर्सामा आएको ज्यानमारा हावाहुरीबाट प्रभावित जनताको गासँ, बास र कपासको उचित प्रबन्ध गर्न नसकेको र केन्द्र सरकारलाई मात्रै दोष दिएको भन्दैँ डा. राउतले रोस प्रकट गरेका हुन् ।
बिहिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटसमार्फत प्रदेश २ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भ्रष्ट र असक्षम भएको उनले आरोप लगाएका छन् । केन्द्रलाई सबै कुरा भन्ने भए प्रदेश सरकार किन र केका लागि भन्दैँ उनले प्रश्न गरेका छन् । भोजभतेरमा करोडौँ स्वाहा गर्दा केन्द्र सरकार बाधा नभएको तर अहिले अहिले भोक–भोकै घरबारविहिन भएर बिचल्ली परेका बाराका हुरी पीडित जनताहरुलाई १०–२० दिन सामूहिक रुपमा मेस संचालन गरेर दाल–भात खुवाउन मुख्यमंत्रीलाई केन्द्र बाधा भयो ? भन्दैँ आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
एकैदिन ७३ लाख खर्च गर्दा केन्द्र बाधा भएन। भोजभतेर मैं ४ करोड स्वाहा गर्दा केन्द्र बाधा भएन। जनतासँग छाला काढे सरी कर बढाएर उठाएको करौडौं रुपैयाँ पोखरी र मंदिर सौन्दर्यीकरणको नाममा आफ्ना लठैत पाल्न खर्च गर्दा केन्द्र बाधा भएन।, उनले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, तर अहिले भोक–भोकै घरबारविहिन भएर बिचल्ली परेका बाराका हुरी पीडित जनताहरुलाई १०–२० दिन सामूहिक रुपमा मेस संचालन गरेर दाल–भात खुवाउन मुख्यमंत्रीलाई केन्द्र बाधा भयो ? बहानाको पनि हद हुन्छ। हरेक कुरामा केन्द्रलाई दोष दिएर आफ्नो असक्षमता र भ्रष्टाचार ढाक्न खोज्ने ?
≠असक्षम ≠भ्रष्ट ≠दलाल ≠प्रदेश नं २ सरकार